Izingane zesikole zithunyelwa emakhaya uma zidinga izindlu zangasese | News24
Izingane zesikole zithunyelwa emakhaya uma zidinga izindlu zangasese
Colchester – Othisha basesikoleni samabanga aphansi e-Eastern Cape bathumela izingane ukuthi ziyosebenzisa izindlu zangasese zasemakhaya ngesikhathi sokufunda ngoba izinsiza zasezindlini zangasese sezisiphuliwe, kubika iGroundUp.
Amathoyilethi asesikoleni iColchester Primary School, kuMasipala iNelson Mandela Bay, awasebenziseki.
Uthishanhloko, uMervin Fortuin, usesebenze kulesi sikole iminyaka engu-16 kanti uthi selokhu kwathi nhlo kuhlale kunenkinga yokucekelwa phansi kwempahla.
“Sengichithe isikhathi esiningi ngizinikele ekuphuculeni izinga lemfundo kulo mphakathi, kodwa manje sengizizwa ngikhathele futhi ngilahlekelwa yithemba.”
OLUNYE UDABA: Zimkhalele odlwengule intombazne ebiyozikhulula ethoyilethi
UFortuin uthi uMnyango wezeMfundo usunikeze lesi sikole yonke into esiyidingayo. Kodwa-ke inkinga ubugebengu obenziwa abahlali “abangenandaba” abasiphula kwasani esansimbi kule zindlu zangasese, okubalwa ompompi kanye nezindlu zikagesi.
Ngonyaka odlule, izindlu zangasese zalungiswa ngosizo lwesinye isikole, iVictoria Park Primary School, esisePort Elizabeth.
Kodwa-ke uFortuin uthi akuphelanga ngisho inyanga silungisiwe, izigebengu zaphinde zagadla futhi, zahlephula yonke into. Lokhu kubashiye bengenazo izindlu zangasese kusukela esigabeni sokugcina sonyaka odlule.
“Kumele sithumele izingane emakhaya azo uma zifuna ukuzikhulula.”
Uthi kufana nokudlala kanye nokumosha imali yesikole, "nayo engekho", ukuhlale njalo belungisa izindlu zangasese zesikole.